नेकपामा अमृत बोहरा र अमिक शेरचनको लिखित असहमति किन ? « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
नेकपामा अमृत बोहरा र अमिक शेरचनको लिखित असहमति किन ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधान र केन्द्रीय कमिटीको संरचनाप्रति आपत्ति जनाउँदै दुईजना स्थायी आमन्त्रित सदस्यले लिखित असहमति राखेका छन् । पार्टीका पुराना नेताद्वय अमृतकुमार बोहरा र अमिक शेरचनले आफूलाई दिएको स्थायी आमन्त्रित सदस्य पद समेत अस्वीकार गरेका छन् । तत्कालिन एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट अनुशासन आयोगको अध्यक्षमा निर्वा्चित भएका बोहराले आफूलाई केन्द्रीय कमिटीबाट हटाइनुको कारण मागेका छन् ।
उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखी ‘तपाईसँगै महाधिवेशनको हलबाट निर्वा्चित म आज किन केन्द्रीय कमिटीबाट हटाइएँ ?’ भनी प्रश्न सोधेका छन् । बोहरा महाधिवेशनमा केशव बडाललाई अनुशासन आयोगको अध्यक्षमा पराजित गरि विजयी भएका थिए । तत्कालिन नेकपा माले र पछिल्लो एमालेका संस्थापक नेता बोहरा माधव नेपाल महासचिव हुँदासम्म दोस्रो वरियताका नेता थिए । बोहराले आफू महाधिवेशनबाट निर्वा्चित केन्द्रीय सदस्य, अनुशासन आयोगको अध्यक्ष र पदेन स्थायी कमिटी सदस्य रहेकाले आमन्त्रित सदस्य नबन्ने प्रष्ट पारेका छन् ।
उनले पार्टीको विधानसमेत बिगारिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । विधानमा अनुशासन आयोगलाई केन्द्रीय कमिटीले कारवाही गर्न सक्ने जस्ता आपत्तिजनक बुँदाहरु राखिएको र धेरै ठाउँमा मनपरी गरिएकाले आफूले असहमति जनाएको बोहराले बताए । केही नेतालाई बलियो बनाउने गरी विधान लेखिएको उनको आरोप छ । बोहराको लिखित असहमतिपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई भेटेर सल्लाह गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
बोहराले आफू अध्यक्षसँगै कुरा गरेपछिमात्र आफ्ना असहमति बाहिर ल्याउने बताए । उता तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अनुशासन आयोग अध्यक्ष अमिक शेरचनले पनि स्थायी आमन्त्रित सदस्यमा अहसमति जनाएका छन् । उनले पनि आफू हेटौंडा महाधिवेशनबाट आयोगको अध्यक्षमा निर्वा्चित भएकाले निर्वा्चित केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा रहनुपर्ने बताएका छन् । असहमतिका कारण नेकपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको माइन्युटमा अमृत बोहरा,अष्टलक्ष्मी शाक्य, अमिक शेरचनले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
स्थायी कमिटी यस्तो बन्यो………
पार्टी एकीकरण भएको ११ दिनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीले पूर्णता पाएको छ । तत्कालिन माओवादी केन्द्रको तर्फबाट १९ जनाको नाम प्राप्त भएपछि ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन भएको हो । स्थायी कमिटीमा तत्कालिन एमालेबाट २६ र तत्कालिन माओवादीबाट १९ जना नेता परेका छन् ।
तत्कालिन एमालेको स्थायी कमिटी यथावत राख्दै रघुजी पन्त, विष्णु रिमाल, बेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ थप भएका छन् । त्यस्तै तत्कालिन माओवादीले नेकपा संयुक्तबाट एकीकरणमा आएका गणेश साह, चुनावअघि नयाँ शक्ति छाडेर फर्किएका देवेन्द्र पौडेल र एकीकरण प्रक्रियामा पछि सामेल भएका मणि थापालाई समेत समावेश गरेको छ । नेकपाले ६ जना नेतालाई स्थायी आमन्त्रित सदस्यका रुपमा राखेको छ । तत्कालिन एमालेका अमृतकुमार बोहोरा, केशव बडाल, सोमनाथ प्यासी र डा.पुष्प कडेल स्थायी आमन्त्रित सदस्य रहनेछन् ।
त्यस्तै तत्कालिन माओवादीबाट अमिक शेरचन र पेशल खतिवडा स्थायी आमन्त्रित सदस्य रहनेछन् । पार्टीको विधान अनुसार ६ जना नेतालाई पदाधिकारीका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । जसमा अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव विष्णु पौडेल छन् । नेकपाले सचिवालय सदस्यबाहेक अन्य स्थायी कमिटी सदस्यहरुको मर्यादाक्रम भने तोकिएको छैन । वर्णानुक्रम अनुसार सदस्यहरुको नाम राखिएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी………….